ထေရီမြတ်​တို့ ပြုံး​တော်​မူကြလိမ့်​မည်​ * Manaw Maya
admin | October 8, 2019 |0| Knowledge , ဘာသာရေး
၁။ မိန်း​မ​တွေဟာ ဥာဏ်​​သေးနုပ်​လို့ တရားထူး တရားမြတ်​ မရနိုင်​
သုဇာတာ​ထေရီမ ကပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မည် ​ထေရီမသည်​ လူဝတ်​နှင့်​ပင်​ ရဟန္တာ ဖြစ်​ပြီးမှ ရဟန်းမ ဖြစ်​ခဲ့သည်​ ထေရီမ၏ အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါတယ်​။
၂။ အသက်​ကြီးမှ အားထုတ်​လို့ တရားရမှာ မဟုတ်​ဆိုသူအတွက်​ ။
မိ​ထွေး​တော်​ ​ဂေါတမီ​ထေရီမ နှင့်​ ​သောဏာ​ ထေရီတို့က ပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မယ်​။
​ဂေါတမီ​ထေရီမကြီးသည်​ အသက်​ ၈၀ တွင်​ မိုင်​ ၄၀၀ ​ကျော်​ခရီး ​ခြေလျင်​နှင်​ကာ မိန်းမများ ရဟန်းဝတ်​ခွင့်​ ရ​အောင်​​တောင်းဆို ခဲ့သူဖြစ်​သည်​ ရဟန်းဖြစ်​ပြီး ရဟန္တာ ဖြစ်​​အောင်​ကြိုးစားပြသွားသူဖြစ်​သည်​ ။
​သောဏာ​ထေရီ မကြီးကား သား၁၀​ယောက်​ မိခင်​ဖြစ်​သည်​ မုဆိုးမဘဝတွင်​ သားများကုို အ​မွေခွဲ​ဝေ​​ပေး၏ သားများက ဥစ္စာလက်​မဲ့ အ​မေ့ကို ပစ်​ထား၍လူ့​ဘောင်​ကို စိတ်​ကုန်​ကာ ရဟန်းဝတ်​ခဲ့သည်​ ။
ရဟန်းမဘဝတွင်​လည်း အခြားရဟန်းမများကအနိုင်​ကျင့်​သည့်​ ဒဏ်​ခံရ​သေးသည်​ ​ရေချိုးခန်း ​ရေဖြည့်​စဉ်​ ​ချော်​လဲရာ ခန္ဓာဒုက္ခကိုဆင်​ခြင်​၏ ။
ထို​နေရာမှာပင်​ ရဟန်းတရား ပြည့်​စုံသွားသည်​ မြတ်​စွာဘုရားက ကြိုးစားအားထုတ်​မှု ဧတဒဂ်​ ​ပေးအပ်​​တော်​မူခဲ့ပါသည်​ ​ထေရီမ ၂ ပါးတို့၏အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို ​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါတယ်​။
၃။ အသက်​ငယ်​ငယ်​​လေးနဲ့ ဘယ်​လိုလုပ် တရားရပါ့မလဲ ဆိုသူအတွက်​ ဥတ္တမာ​ထေရီ နှင့် ​သေလာ​ထေရီမတို့က ပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မည်​။
​ထေရီမ ၂ ပါးလုံးပင်​ ၇ နှစ်​သမီးအရွယ်​တွင်​ ရဟန္တာမ ဖြစ်​ခဲ့ကြပါသည်​ ​ထေရီမ ၂ ပါး၏ အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို ​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​။
၄။ ဘာသာခြား ဖြစ်​ခဲ့လို့ တရားမရနိုင်​ ဆိုသူများအတွက်​
နန္ဒတ္တရာ​ထေရီ စာလာ​ထေရီ ကုဏ္ဌလ​ကေသာ​​ထေရီမ တို့ကပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မည်​ ​ထေရီမ ၃ ပါးပင်​ ဘာသာခြားလူကုံထံ အသိုင်းအဝိုင်း၌ ​မွေးဖွာခဲ့ကြပြီး ဘာသာခြား ​ဒေသနာများကို ​လေ့လာကျွမ်းကျင်​ထားသူတို့ပင်​ဖြစ်​ကြသည်​ ။
နန္ဒတ္တရာ​ထေရီ မှာ အရှင်​​မောဂ္ဂလန်​ နှင့်​ ဝါဒပြိုင်​ရာမှ ရှုံးပြီး ရဟန်းမ ဝတ်​လာသူဖြစ်​၏ မကြာမီ ရဟန္တာမ ဖြစ်​​တော်​မူ၏ ။
စာလာ​ထေရီမ မှာအရှင်​သာရိပုတ္တရာ၏နှမအရင်းဖြစ်​၏ အကို့ကို ယုံကြည်​၍ အခြားအယူစွန့်​ကာ ရဟန်မ ဝတ်​ပြီး ရဟန္တာဖြစ်​ခဲ့သူ ဖြစ်​ပါသည်​ ။
ကုဏ္ဌလ​ကေသာ​ ​ထေရီမ ဘဝက ရာဇ၀တ်​သားကိုအရူးအမူး ချစ်​ခဲ့မိ၍ ​သေတွင်းမှ ကယ်​ထုတ်​ပြီး လင်​​တော်​ခဲ့သူဖြစ်​သည်​ ။
ထိုလင်​ကပင်​ အသက်​ကိုရန်​ရှာ​သောအခါ လင်​ကိုသတ်​ပြီး တိတ္ထိတို့ထံ ရဟန်းပြုခဲ့သည်​ တိတ္ထိဝါဒများသင်​ယူပြီး ဝါဒပြိုင်​ရာမှ အရှင်​သာရိပုတ္တရာ နှင့်​​တွေ့ပြီး ကျွတ်​တမ်းဝင်​ခဲ့ ဖြစ်​ပါသည်​ ။
​ထေရီ ၃ ပါးတို့၏ အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို ​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​ ။
၅။ အသက်​​မွေးလုပ်​ငန်း နိမ့်​ကျခဲ့လို့ တရားမရနိုင်​ ဆိုသူများအတွက်​
ဝိမလာ​ထေရီ အဘယာ​ထေရီ အမ္ဗပါလီ​ထေရီတို့က ပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မည်​ ​ထေရီသုံးပါးလုံး ပြည့်​တန်​ဆာ ဘဝဖြင့်​ ဖြတ်​သန်း ခဲ့ရသူများဖြစ်​ခဲ့ကြသည်​ ။
ဝိမလာ​ထေရီ ဆိုပါလျှင်​ လူ့ဘဝက အရှင်​​မောဂ္ဂလာန်​ ကိုယ်​​တော်​မြတ်​ကြီးကို ​ကျောင်းအထိ လိုက်​ပို့၍ ဖျား​ယောင်းဖူးသူဖြစ်​သည်​ ​နောင်​ တရားအသိဝင်​မှ​တောင်းပန်​ကာ ရဟန်းမ ဝတ်​ခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​ ။
​ထေရီမ ၃ ပါးစလုံး ရဟန္တာဖြစ်​ခဲ့ကြပါသည်​ ​ထေရီမ ၃ ပါး၏အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို ​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​ ။
၆။ သား၊ သမီး​သောက ကြီးလွန်းလို့တရားမရနိုင်​ ဆိုသူများအတွက်​
ကိသာ​ဂေါတမီ​ထေရီ နှင့်​ ဥပ္ပရီ​ထေရီမ တို့ကပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မည်​ ကိသာ​ဂေါတမီ​ထေရီ သည်​ သား​သေကိုရင်​မှာပိုက်​ပြီး လမ်းတကာ​ပြေးလွှားရင်းဘုရားဆီ​ရောက်​ကာ မုန့်​ညင်း​စေ့ တရားဖြင့်​အသိဝင်​ကာ ​သောတာပန်​ဖြစ်​ပြီး ရဟန်းမ ဝတ်​ခဲ့သူဖြစ်​၏ ။
ဥပ္ပရီ​ထေရီမကား ​ကောသလမင်း၏မိဖုရားဖြစ်​ခဲ့၏ အလွန်​ချစ်​​သော သမီး​သေဆုံးခဲ့ရာသမီးစိတ်​ဖြင့်​ ပူ​လောင်​​နေရ၏ သမီးအုတ်​ဂူရှိရာ သွားငို​နေရ၏ ထို့သို့ရှိရာမှ
မြတ်​စွာဘုရား က နိမ္မိတရုပ်​ပွားလွှတ်​၍ တရား​ဟောရာ လူအဖြစ်​နှင့်​ပင်​ ရဟန္တာဖြစ်​ပြီး​နောက်​မှဘိက္ခုနီ ဝတ်​ခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​ ​ထေရီမ ၂ပါး ၏အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို ​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​ ။
၇။ စိတ်​ဓာတ်​ ကျလွန်းသူ​တွေ တရားထူး မရနိုင်​ ဆိုသူများအတွက်
အညတရ​ထေရီ နှင့်​ သီဟာ​ထေရီတို့ က ပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မည်​ အညတရ​ထေရီ သည်​ ကပိလဝတ်​နန်း​တော်​၌ မိ​ထွေး​တော်​ ၏ ရံ​ရွေ​တော်​ဖြစ်​ခဲ့၏ ။
ကာမဂုဏ်​ အ​ပျော်ပါး၌သာ စိတ်​​ရောက်​၏ မိ​ထွေး​တော်​ကို မခွဲနိုင်​၍သာ သင်္ကန်း ဝတ်​ခဲ့ရ​သော်​လည်း မ​ပျော်​ တရားအားထုတ်​​သော သမာဓိ လုံးဝမရ စိတ်​ဓါတ်​ကျ၍ ​နေ့စဉ်​နှင့်​အမျှ ငိုရသည်​ ၂၅ နှစ်​ ကြာပြီး​နောက်​မှ ရဟန္တာ ဖြစ်​သွားသည်​ ။
သီဟာ​ထေရီ ကား ​အောင်​မြင်​​ကျော်​ကြားမှု အားလုံးစွန့်​ပြီး ရဟန်းပြုလာရာမှမ​ပျော်​ရွှင်​​တော့ ထွက်​ရန်​ ​နေရန်​ ဆုံးဖြတ်​ခက်​ပြီး ကြိုးဆွဲချ​သေဖို့ ခုန်​ချလုလုတွင်​ ရဟန္တာ အဖြစ်​​ရောက်​၏ ။​ထေရီမ ၂ ပါးတို့အပြုံးက အထက်​စကားကို​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​ ။
၈။ ​လောကဓံ ရိုက်​ချက်​​တွေ ပြင်းထန်​လွန်းလို့ တရားမရနိုင်​ ဆိုသူများအတွက်​
ပဋာစာရီ​ထေရီ နှင့်​ ဝါသိဋ္ဌီ​ထေရီမ ၂ပါးတို့က ပြုံး​တော်​မူကြပါလိမ့်​မည်​။
ပဋာစာရီ​ထေရီ သည်​ သား ၂ ဦး လင်​ မိဘများ​သေခြင်းကို ဆက်​တိုက်​​တွေ့ကြုံရပြီး​နောက် သွက်​သွက်​ခါ​အောင်​ ရူးသွားခဲ့သည် ဘုရားနဲ့တွေ့မှ တရားထူးရခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​ ။
ဝါသိဋ္ဌီ​ထေရီမကား သားရူးရူးပြီး​တွေ့ရာသွား ​နေရာမှ ဘုရားနှင့်​​တွေ့ပြီး တရားရ ရဟန်းမပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​ ​ထေရီမ ၂ပါးတို့ အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​။
၉။ အိမ်​​ထောင်​​ရေး စီးပွား​ရေး ဆိုးလွန်းလို့ တရားအားထုတ်​ဖို့ အဆင်​မ​ပြေဘူးလို့ ဆိုသူများအတွက်​
စန္ဒာ​ထေရီ နှင့်​ ဣသိဒါသီ​ထေရီမတို့က ပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မည်​ စန္ဒာ​ထေရီ သည်​ ကူးစက်​​ရောဂါ​ကြောင့်​မိသားစု လိုက်​ ပျက်​စီးရာမှ သူ​တောင်းစားဘဝ ​ရောက်​ခဲ့ရ၏ ။
လှည့်​လည်​ ​တောင်းရမ်းရင်း ဘိက္ခုနီမ​ကျောင်း​ရောက်​ကာ တရားနာပြီး ရဟန်းမ ဖြစ်​ခဲ့၍ မကြာမီ ရဟန္တာ ဖြစ်​သွားသည်​ ။
ဣသိဒါသီ​ထေရီမကား လူ့ဘဝ၌ အိမ်​​ထောင်​သုံးခါ ကျခဲ့သည်​ ပထမ ဒုတိယ လင်​သားများက အပြစ်​မရှိပဲ ပစ်​ခွာကြ၍ ဖခင်​ကသူ​တောင်းစားနှင့်​ လက်​ဆက်​​ပေး၏သူ​တောင်းစားကလည်း စွန့်​ပစ်​သွား၏ ။
ရပ်​ရွာတွင်​ မျက်​နှာမပြဝံ့၍သတ်​​သေရန်​ စဉ်းစား ရာမှ ဘိက္ခုနီဝတ်​ခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​ ရဟန်းမ ဖြစ်​ပြီး မကြာမီ ရဟန္တာမကြီး ဖြစ်​​တော်​မူသည်​ ။​ထေရီမ ၂ ပါး ၏အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို ​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​။
၁၀. အလှ ဥစ္စာ ပြည့်​စုံတဲ့ ဘဝ မို့ တရားအားထုတ်​ဖို့ မလို​သေးဘူး ဆိုသူများအတွက်​ ​
ခေမာ​ထေရီ ဥပ္ပလဝဏ်​​ထေရီ ဘဒ္ဒကစ္စနာ​ထေရီ ရူပနန္ဒ​ထေရီ တို့က ပြုံး​တော်​မူကြပါလိမ့်​မည်​
နန်းစည်းစိမ်​ နှင့်​ အလှဧကရီ ဘဝများကို စွန့်​ပစ်​၍ ​ထေရီမတို့ ရဟန်းပြု တရားအားထုတ်​ခဲ့ကြပါသည်​ ရဟန္တာမကြီးများ ဖြစ်​​တော်​မူခဲ့ကြသည်​ ​ထေရီမ ၄ ပါး တို့အပြုံးက အထက်​ပါစကားကို ​ချေဖျက်​ပြီး ဖြစ်​ပါသည်​။
တရားအားထုတ်​ဖို့. တရားသိမြင်​ဖို့ အ​ကြောင်းပြချက်​ ဆင်​​ခြေများဖြင့်​ ရှောင်​လွဲလိုပါ​သေး​သော်​ထို​ရှောင်​လွဲမူ တို့အတွက်​ ​ထေရီမြတ်​တို့ ပြုံး​တော်​မူပါလိမ့်​မယ် ။
၁။ မိနျးမတှဟော ဉာဏျသေးနုပျလို့ တရားထူး တရားမွတျ မရနိုငျ
သုဇာတာထရေီမ ကပွုံးတျောမူပါလိမျ့မညျ ထရေီမသညျ လူဝတျနှငျ့ပငျ ရဟန်တာ ဖွဈပွီးမှ ရဟနျးမ ဖွဈခဲ့သညျ ထရေီမ၏ အပွုံးက အထကျပါစကားကိုခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါတယျ။
၂။ အသကျကွီးမှ အားထုတျလို့ တရားရမှာ မဟုတျဆိုသူအတှကျ ။
မိထှေးတျော ဂေါတမီထရေီမ နှငျ့ သောဏာ ထရေီတို့က ပွုံးတျောမူပါလိမျ့မယျ။
ဂေါတမီထရေီမကွီးသညျ အသကျ ၈၀ တှငျ မိုငျ ၄၀၀ ကြျောခရီး ခွလေငျြနှငျကာ မိနျးမမြား ရဟနျးဝတျခှငျ့ ရအောငျတောငျးဆို ခဲ့သူဖွဈသညျ ရဟနျးဖွဈပွီး ရဟန်တာ ဖွဈအောငျကွိုးစားပွသှားသူဖွဈသညျ ။
သောဏာထရေီ မကွီးကား သား၁၀ယောကျ မိခငျဖွဈသညျ မုဆိုးမဘဝတှငျ သားမြားကို အမှခှေဲဝပေေး၏ သားမြားက ဥစ်စာလကျမဲ့ အမကေို့ ပဈထား၍လူ့ဘောငျကို စိတျကုနျကာ ရဟနျးဝတျခဲ့သညျ ။
ရဟနျးမဘဝတှငျလညျး အခွားရဟနျးမမြားကအနိုငျကငျြ့သညျ့ ဒဏျခံရသေးသညျ ရခြေိုးခနျး ရဖွေညျ့စဉျ ခြျောလဲရာ ခန်ဓာဒုက်ခကိုဆငျခွငျ၏ ။
ထိုနရောမှာပငျ ရဟနျးတရား ပွညျ့စုံသှားသညျ မွတျစှာဘုရားက ကွိုးစားအားထုတျမှု ဧတဒဂျ ပေးအပျတျောမူခဲ့ပါသညျ ထရေီမ ၂ ပါးတို့၏အပွုံးက အထကျပါစကားကို ခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါတယျ။
၃။ အသကျငယျငယျလေးနဲ့ ဘယျလိုလုပျ တရားရပါ့မလဲ ဆိုသူအတှကျ ဥတ်တမာထရေီ နှငျ့ သလောထရေီမတို့က ပွုံးတျောမူပါလိမျ့မညျ။
ထရေီမ ၂ ပါးလုံးပငျ ၇ နှဈသမီးအရှယျတှငျ ရဟန်တာမ ဖွဈခဲ့ကွပါသညျ ထရေီမ ၂ ပါး၏ အပွုံးက အထကျပါစကားကို ခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ။
၄။ ဘာသာခွား ဖွဈခဲ့လို့ တရားမရနိုငျ ဆိုသူမြားအတှကျ
နန်ဒတ်တရာထရေီ စာလာထရေီ ကုဏ်ဌလကသောထရေီမ တို့ကပွုံးတျောမူပါလိမျ့မညျ ထရေီမ ၃ ပါးပငျ ဘာသာခွားလူကုံထံ အသိုငျးအဝိုငျး၌ မှေးဖှာခဲ့ကွပွီး ဘာသာခွား ဒသေနာမြားကို လလေ့ာကြှမျးကငျြထားသူတို့ပငျဖွဈကွသညျ ။
နန်ဒတ်တရာထရေီ မှာ အရှငျမောဂ်ဂလနျ နှငျ့ ဝါဒပွိုငျရာမှ ရှုံးပွီး ရဟနျးမ ဝတျလာသူဖွဈ၏ မကွာမီ ရဟန်တာမ ဖွဈတျောမူ၏ ။
စာလာထရေီမ မှာအရှငျသာရိပုတ်တရာ၏နှမအရငျးဖွဈ၏ အကို့ကို ယုံကွညျ၍ အခွားအယူစှနျ့ကာ ရဟနျမ ဝတျပွီး ရဟန်တာဖွဈခဲ့သူ ဖွဈပါသညျ ။
ကုဏ်ဌလကသော ထရေီမ ဘဝက ရာဇဝတျသားကိုအရူးအမူး ခဈြခဲ့မိ၍ သတှေငျးမှ ကယျထုတျပွီး လငျတျောခဲ့သူဖွဈသညျ ။
ထိုလငျကပငျ အသကျကိုရနျရှာသောအခါ လငျကိုသတျပွီး တိတ်ထိတို့ထံ ရဟနျးပွုခဲ့သညျ တိတ်ထိဝါဒမြားသငျယူပွီး ဝါဒပွိုငျရာမှ အရှငျသာရိပုတ်တရာ နှငျ့တှပွေီ့း ကြှတျတမျးဝငျခဲ့ ဖွဈပါသညျ ။
ထရေီ ၃ ပါးတို့၏ အပွုံးက အထကျပါစကားကို ခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ ။
၅။ အသကျမှေးလုပျငနျး နိမျ့ကခြဲ့လို့ တရားမရနိုငျ ဆိုသူမြားအတှကျ
ဝိမလာထရေီ အဘယာထရေီ အမ်ဗပါလီထရေီတို့က ပွုံးတျောမူပါလိမျ့မညျ ထရေီသုံးပါးလုံး ပွညျ့တနျဆာ ဘဝဖွငျ့ ဖွတျသနျး ခဲ့ရသူမြားဖွဈခဲ့ကွသညျ ။
ဝိမလာထရေီ ဆိုပါလြှငျ လူ့ဘဝက အရှငျမောဂ်ဂလာနျ ကိုယျတျောမွတျကွီးကို ကြောငျးအထိ လိုကျပို့၍ ဖြားယောငျးဖူးသူဖွဈသညျ နောငျ တရားအသိဝငျမှတောငျးပနျကာ ရဟနျးမ ဝတျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ။
ထရေီမ ၃ ပါးစလုံး ရဟန်တာဖွဈခဲ့ကွပါသညျ ထရေီမ ၃ ပါး၏အပွုံးက အထကျပါစကားကို ခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ ။
၆။ သား၊ သမီးသောက ကွီးလှနျးလို့တရားမရနိုငျ ဆိုသူမြားအတှကျ
ကိသာဂေါတမီထရေီ နှငျ့ ဥပ်ပရီထရေီမ တို့ကပွုံးတျောမူပါလိမျ့မညျ ကိသာဂေါတမီထရေီ သညျ သားသကေိုရငျမှာပိုကျပွီး လမျးတကာပွေးလှားရငျးဘုရားဆီရောကျကာ မုနျ့ညငျးစေ့ တရားဖွငျ့အသိဝငျကာ သောတာပနျဖွဈပွီး ရဟနျးမ ဝတျခဲ့သူဖွဈ၏ ။
ဥပ်ပရီထရေီမကား ကောသလမငျး၏မိဖုရားဖွဈခဲ့၏ အလှနျခဈြသော သမီးသဆေုံးခဲ့ရာသမီးစိတျဖွငျ့ ပူလောငျနရေ၏ သမီးအုတျဂူရှိရာ သှားငိုနရေ၏ ထို့သို့ရှိရာမှ
မွတျစှာဘုရား က နိမ်မိတရုပျပှားလှတျ၍ တရားဟောရာ လူအဖွဈနှငျ့ပငျ ရဟန်တာဖွဈပွီးနောကျမှဘိက်ခုနီ ဝတျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ထရေီမ ၂ပါး ၏အပွုံးက အထကျပါစကားကို ခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ ။
၇။ စိတျဓာတျ ကလြှနျးသူတှေ တရားထူး မရနိုငျ ဆိုသူမြားအတှကျ
အညတရထရေီ နှငျ့ သီဟာထရေီတို့ က ပွုံးတျောမူပါလိမျ့မညျ အညတရထရေီ သညျ ကပိလဝတျနနျးတျော၌ မိထှေးတျော ၏ ရံရှတေျောဖွဈခဲ့၏ ။
ကာမဂုဏျ အပြျောပါး၌သာ စိတျရောကျ၏ မိထှေးတျောကို မခှဲနိုငျ၍သာ သင်ျကနျး ဝတျခဲ့ရသျောလညျး မပြျော တရားအားထုတျသော သမာဓိ လုံးဝမရ စိတျဓါတျကြ၍ နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ ငိုရသညျ ၂၅ နှဈ ကွာပွီးနောကျမှ ရဟန်တာ ဖွဈသှားသညျ ။
သီဟာထရေီ ကား အောငျမွငျကြျောကွားမှု အားလုံးစှနျ့ပွီး ရဟနျးပွုလာရာမှမပြျောရှငျတော့ ထှကျရနျ နရေနျ ဆုံးဖွတျခကျပွီး ကွိုးဆှဲခသြဖေို့ ခုနျခလြုလုတှငျ ရဟန်တာ အဖွဈရောကျ၏ ။ထရေီမ ၂ ပါးတို့အပွုံးက အထကျစကားကိုခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ ။
၈။ လောကဓံ ရိုကျခကျြတှေ ပွငျးထနျလှနျးလို့ တရားမရနိုငျ ဆိုသူမြားအတှကျ
ပဋာစာရီထရေီ နှငျ့ ဝါသိဋ်ဌီထရေီမ ၂ပါးတို့က ပွုံးတျောမူကွပါလိမျ့မညျ။
ပဋာစာရီထရေီ သညျ သား ၂ ဦး လငျ မိဘမြားသခွေငျးကို ဆကျတိုကျတှကွေုံ့ရပွီးနောကျ သှကျသှကျခါအောငျ ရူးသှားခဲ့သညျ ဘုရားနဲ့တှမှေ့ တရားထူးရခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ။
ဝါသိဋ်ဌီထရေီမကား သားရူးရူးပွီးတှရေ့ာသှား နရောမှ ဘုရားနှငျ့တှပွေီ့း တရားရ ရဟနျးမပွုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ထရေီမ ၂ပါးတို့ အပွုံးက အထကျပါစကားကိုခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ။
၉။ အိမျထောငျရေး စီးပှားရေး ဆိုးလှနျးလို့ တရားအားထုတျဖို့ အဆငျမပွဘေူးလို့ ဆိုသူမြားအတှကျ
စန်ဒာထရေီ နှငျ့ ဣသိဒါသီထရေီမတို့က ပွုံးတျောမူပါလိမျ့မညျ စန်ဒာထရေီ သညျ ကူးစကျရောဂါကွောငျ့မိသားစု လိုကျ ပကျြစီးရာမှ သူတောငျးစားဘဝ ရောကျခဲ့ရ၏ ။
လှညျ့လညျ တောငျးရမျးရငျး ဘိက်ခုနီမကြောငျးရောကျကာ တရားနာပွီး ရဟနျးမ ဖွဈခဲ့၍ မကွာမီ ရဟန်တာ ဖွဈသှားသညျ ။
ဣသိဒါသီထရေီမကား လူ့ဘဝ၌ အိမျထောငျသုံးခါ ကခြဲ့သညျ ပထမ ဒုတိယ လငျသားမြားက အပွဈမရှိပဲ ပဈခှာကွ၍ ဖခငျကသူတောငျးစားနှငျ့ လကျဆကျပေး၏သူတောငျးစားကလညျး စှနျ့ပဈသှား၏ ။
ရပျရှာတှငျ မကျြနှာမပွဝံ့၍သတျသရေနျ စဉျးစား ရာမှ ဘိက်ခုနီဝတျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ရဟနျးမ ဖွဈပွီး မကွာမီ ရဟန်တာမကွီး ဖွဈတျောမူသညျ ။ထရေီမ ၂ ပါး ၏အပွုံးက အထကျပါစကားကို ခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ။
၁၀. အလှ ဥစ်စာ ပွညျ့စုံတဲ့ ဘဝ မို့ တရားအားထုတျဖို့ မလိုသေးဘူး ဆိုသူမြားအတှကျ
ခမောထရေီ ဥပ်ပလဝဏျထရေီ ဘဒ်ဒကစ်စနာထရေီ ရူပနန်ဒထရေီ တို့က ပွုံးတျောမူကွပါလိမျ့မညျ
နနျးစညျးစိမျ နှငျ့ အလှဧကရီ ဘဝမြားကို စှနျ့ပဈ၍ ထရေီမတို့ ရဟနျးပွု တရားအားထုတျခဲ့ကွပါသညျ ရဟန်တာမကွီးမြား ဖွဈတျောမူခဲ့ကွသညျ ထရေီမ ၄ ပါး တို့အပွုံးက အထကျပါစကားကို ခဖြေကျြပွီး ဖွဈပါသညျ။
တရားအားထုတျဖို့. တရားသိမွငျဖို့ အကွောငျးပွခကျြ ဆငျခွမြေားဖွငျ့ ရှောငျလှဲလိုပါသေးသျောထိုရှောငျလှဲမူ တို့အတှကျ ထရေီမွတျတို့ ပွုံးတျောမူပါလိမျ့မယျ ။